Ciidamada Dowladda iyo Al-Shabaab oo ku dagaalamaya Degaanada Boofoow iyo Kabtanlaas – Balcad.com Teyteyleey
Ciidamada Dowladda iyo Al-Shabaab oo ku dagaalamaya Degaanada Boofoow iyo Kabtanlaas
Wararka ka imaanaya Degaanada Boofoow iyo You can get your viagra Plus at the most affordable price here! Buy it only for 0.98 USD with us now! Kabtanlaas ee Gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya inuu hadda ka soconayo Dagaal u dhexeeya Ciidamada Milatariga Soomaaliya iyo Al-Shabaab.
Iska horimaadka iminka socda ayaa yimid kadib markii Ciidamada Dowladda ay weerar ku qaadeen Fariisimo Al-Shabaab ku lahaayeen deeganadaasi, iyadoo dadka deegaanka ay sheegeen inay Maqlayaan daryanka Madaafiic ee labada dhinac is weydaarsanayaan.
Dhanka kale Ciidamadda Xooga Dalka Soomaaliya ayaa u muuqdo inay durbaba bilaabeen ka jawaab celinta Dalabkii Wasiirka gaashaandhiga ee ahaa in Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya looga Fadhiyo inay Furaan dhamaan Wadooyinka ay ku sugan yihiin Maleeshiyaadka Al-shabaab.
Deg Deg: Guddoomiye cusub oo G/Banaadir loo magacaabay iyo Taliyaal cusub oo loo magacaabay Nabad Sugidda iyo Milatariga.